Dzvanya Webhu Kuongorora | Martech Zone
Svondo, Kubvumbi 15, 2007 Svondo, Kubvumbi 15, 2007 Douglas Karr
Vanhu varipo Sellsius vari kukurudzira Clicky seimwe nzira yewebhu analytics package. Ini parizvino ndinoshandisa Google Analytics uye yakanaka - asi zvichiri kunetsekana kutenderera uye kudonhedza pasi pane data raunoda. Iwo ma Screenshots e Clicky tarisa zvakanakisa, handigoni kumirira kuti ndipinde mukati.
Iyi inogona kunge iri pasuru yandinokurudzira kune vese vatengi vangu - zviri mahara kusaina. Iwe unogona kukwidziridza kune yehunyanzvi vhezheni ye $ 2 chete pamwedzi!
Fadza vashanyi vako veWebhu neiyo chaiyo-nguva Fomu Validation
Apr 15, 2007 pa 9: 45 PM
Ini ndaiwanzoshandisa chishandiso ichi wich ichi chakavakirwa kubva pairi, inonzi pmetrics. Nehurombo rimwe zuva zvakangoerekana zvanyangarika. Ini ndakatanga kuishandisa mushure mekuguta nekushomeka kwegoogle analytics, yayo iyi google haina kuisa kukwana kwakaringana mukati.
Ndakawana sarudzo dze pmetrics kuva dzakanaka, asi haina kuenzanisa neGoogle analytics, nhamba dzangu dzaigara dzakaderera uye hafu yezvinhu zvaisashanda.
Iyi webhusaiti yeClicky yakangofanana neyemametric chete neine bhena nyowani. Ndinovimba kuti sevhisi iyi yakadzvanywa uye inoshanda zvirinani, ndichaiyedza (pane chako chinongedzo chinongedzo :)). Ndinovimba chokwadi chekuti chishandiso ichi chakavhurwa sosi zvinoreva kuti boka rose reanotonhorera matanho stats zvirongwa zvichatanga kubuda sezvo kuchine nzvimbo yekuzvidza iyo yekuti mumwe munhu auye kuzoita webhu traffic chirongwa chaiko.
Apr 15, 2007 pa 10: 51 PM
Mushure mekuishandisa kwemaawa mashoma ini ndinogona kupupura kuti izvi hazvina chero matambudziko andakasangana nawo pmetrics. Yakakura Sevhisi.
Apr 16, 2007 pa 8: 14 AM
Wow, iyo yakanaka, yakachena, iri nyore kuverenga chati. Iwe ungafunge kuti yakawanda-mabhiriyoni emadhora kambani senge Google yaizogona zvirinani kuwana chati inotaridzika zvakanaka. Ndatenda nezano!
Webhu Yehunyanzvi Yekuongorora
Sep 19, 2007 pa 6: 51 AM
Ndakatarisa muClicky asi ini ndichiri nemafungiro ekuti Google Analytics yakanakira kutanga muwebhu analytics. Kana iwe ukawana kuganhurirwa kweGoogle saka ingangoita nguva yekutanga kutsvaga mhinduro yakabhadharwa seClickTracks kana NetTracker kukupa iwe mhinduro yekugona kugona.